I-Apple inciphisa ixabiso le-iMac engama-intshi ezingama-300 ngeglasi eyenziwe ngombala nano phantse ngama-27 euros | Ndisuka mac
Njengoko iintsuku zihamba kwaye imithombo yeendaba sijonga utshintsho olungakhange lubhengezwe ngu-Apple kulo msitho, sifumana iindaba ezinomdla. Enye yazo ifumaneka kwi-iMac ye-intshi ezingama-27, imodeli, okwangoku ifumaneka kuphela ngeeprosesa ze-Intel ngokungafaniyo neMac entsha ene-intshi ezingama-24.
Le modeli, njengePro Display XDR ivumela abasebenzisi ukuba yongeza iglasi ene-nanotextured, ngendleko ezongezelelweyo ze-625 euro. Le glasi inciphisa ukubonakaliswa kunye nelitha ngokunikezela ngokugqitywa kwe-matte. Emva komsitho, iApple ilinciphisile ixabiso lolu khetho phantse ngama-euro angama-300.
Ukuba sijonga kule modeli, siyabona ukuba ixabiso langoku lokhetho lufumaneka njani nge-345 euros, ethi ucinga ukuncitshiswa kwama-euro angama-280. Nangona kunjalo, ukuncitshiswa kwale glasi ikhethekileyo kuyaqhubeka ukubiza amaxabiso afanayo kwiPro Display, iindleko ezongezelelweyo ze-1.000 euro.
Inkcazo yolu khetho iApple ithi:
Nangona iglasi esemgangathweni ye-iMac kunye neglasi ye-nano-textured ibonelela ngokubonakalisa okuphantsi kakhulu, kubalulekile ukuvavanya imeko apho uza kusebenza khona.
Ukuba awukwazi ukulungelelanisa ukukhanya okukufutshane, unokhetho olutsha lwe-matte ngeglasi eyenziwe nge-nano. Ngokwesiqhelo, umphezulu wescreen se-matte unesambatho esisasaza ukukhanya.
Nangona kunjalo, la maleko anciphisa umahluko, ukongeza ekuveliseni i-haze kunye ne-flare. I-nanotexture ye-iMac ifakwe kwiglasi kwinqanaba le-nanometer, linika umgangatho ophezulu womfanekiso ogcina ukungafani kunye nokusabalalisa ukukhanya ukunciphisa ngokukhawuleza ukubonakalisa.
Okwangoku, sisalinde amarhe okuba iMac entsha ephezulu izaliseke. U-Apple uyaqhubeka nokucebisa nge-27-intshi iMac, eyasungulwa ngo-Agasti kunyaka ophelileyo, njengenye indlela yabathengi abaqeqeshiweyo ngoku IMac Pro ayisasebenzi kubathengi abangayifuni iMac Pro.
Okwangoku, akukho marhe alatha ekuvuseleleni i-27-intshi iMac uluhlu, uhlaziyo ekufuneka lususe iprosesa ye-Intel ukudibanisa iprosesa entsha ye-Apple Silicon, iprosesa, njengoko sinokubona kwisiganeko sokugqibela, ikwenzile noluhlu lwePad Pro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple inciphisa ixabiso le-iMac ye-intshi ezingama-300 ngeglasi eyenziwe ngombala nano phantse ngama-27 euros